အချိန်ကိုက်ရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ မြင်ဖူးပြီးပြီလား? – Cele Channel
အချိန်ကိုက်ရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ မြင်ဖူးပြီးပြီလား?
Posted on February 10, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
ကားမောင်းနေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြလို့ သေဆုံးခဲ့သော စုံတွဲများ
Posted on December 16, 2017 Author Cele
ကားမောင်းနေစဉ် ဟိုဒင်းဟိုဝှာလုပ်ခဲ့ကြလို့ သေဆုံးခဲ့သော စုံတွဲများ 1.The Taiwanese couple 2017 ခုနှစ် မေလမှာ ထိုင်ဝမ်စုံတွဲဟာ BMW ကားမောင်းရင်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကားအတွင်းမှာ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားဟာ ဘောင်းဘီချွတ်လျက်သားဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးကတော့ အကျီင်္မပါ ပါဘူး။သူတို့ဟာ တစုံတရာကို အပြင်းထန် လှုပ်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။သေသည့်တိုင် ပျော်ရွှင်စရာ အဆုံးသတ်ခဲ့သလိုပါပဲ။ 2.The couple who drowned while they were having sex 2017 ဂျွန်လမှာပဲ ရုရှား စုံတွဲတစ်တွဲဟာလဲ ကားထဲမှာ အချစ်နာလန်ထရင်း ရေကန်ထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ အသက် 22 နှစ်သာရှိသေးတာဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ပိတ်မိပြီး ထွက်မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 3.The police officer and his lover who died while […]
ခင်ပွန်းသည်ကိုကွာရှင်းပြီး မိကျောင်းနဲ့ပဲ တစ်သက်လုံးနေသွားမယ့် အမျိုးသမီး
Posted on November 14, 2017 Author Cele
တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ဇနီးသည်တွေက ရက်စက်တတ်လာပြီဆိုရင် ခင်ပွန်းဖြစ် သူတွေအတွက်တော့ လုံးဝကို ငရဲတစ်ခုလိုပါပဲ။ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေ အရမ်းမုန်းလာပြီဆိုရင် တော့ ဘယ်သူမှ တားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် ဂျွန်နီလို့ခေါ်တဲ့ သြစတြေးလျ ဇနီး သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မိကျောင်းတစ်ကောင်တို့ နှစ်ခုထဲမှတစ်ခု ကိုရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့ရာမှ မွေးထားတဲ့မိချောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုသာ ကွာရှင်းခဲ့ပြီးတော့ မိကျောင်းတစ်ကောင်ကို သားသမီးတစ်ဦးလို ထိန်းကျောင်း မွေးမြူခဲ့လို့ အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၁၃ နှဏ်ကြာကာလအတွင်းမှာ အိမ်မွေးတိရ စ္ဆာန်တွေ မွေးမြူရတာ ရူးသွပ်တဲ့ အမျိုးသမီးမှာ တစ်မီတာဝက်ရှိတဲ့ မိကျောင်းတစ်ကောင်ကိုမွေးမြူ ခြင်းကို နှစ်သက်ပြီးတော့ အမြဲတမ်းလိုလို အဆိုပါ မိကျောင်းတစ်ကောင်နဲ့ အချိန်များစွာ ကုန်နေခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
အသက် ၁၈ မှ ၃၅ ကြား မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အချိူးအစားများ
ငါးပေလေးလက်မ   အသက် ၁၈ မှ ၃၅ ကြား မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အချိူးအစားများ   ခါးဆိုဒ်  ၂၀ လက်မ = ပိန်လွန်းသော ခါး ၂၂ လက်မ = ပိန်သော ခါး ၂၄ လက်မ = အဆီမရှိသော လှပသော ခါး ၂၆ လက်မ = အသားပြည့်သော ခါး ၂၈ လက်မ = ခါးတုတ်သည် ၃၀ လက်မ = အဆီများသော ခါး ၃၂ လက်မ = အဆီများလွန်းသော ခါး ၃၄ လက်မ = ဗိုက်ပူအဆီခေါက်များသော ခါး […]
ခရီးအတူသွားရင်း G FATT ကိုချစ်စနိုးနာမည်ပြောင်လေးပေးလိုက်တဲ့နန်းစု
မြန်မာပြည်မှာ သေဒါဏ်ကျတယ်ဆိုတာ (၆)နှစ်(၈)လ ပါပဲ